Ailika Inotangisa Iyo Inoshandiswa Munda weSolar Power Generation
1. Simba rezuva revashandisi: mashoma masosi esimba kubva pa10-100w anoshandiswa kushandiswa kwesimba kwezuva nezuva munzvimbo dziri kure dzisina magetsi, senzvimbo dzenzvimbo, zvitsuwa, nzvimbo dzevafundisi, miganhu yemuganhu uye humwe hupenyu hwemauto nevevanhu, sekuvhenekesa , TV, redhiyo rekodhi, nezvimwe; 3-5kw mhuri denga afoot-co ...
1. Simba rezuva isimba risingaperi simba rakachena, uye gadziriro yemagetsi ezuva inotenderera yakachengeteka uye yakavimbika uye haizokanganisike nedambudziko remagetsi uye kusagadzikana kwezvinhu mumusika wemafuta; 2, zuva rinopenya pasi, simba rezuva rinowanikwa kwese kwese, rezuva photovoltaic simba geni ...
Alikai Inosvitsa Iwo Maficha Ekutarisirwa Mukugadzirwa KweKumba Solar Power Generation
1. Funga mashandisiro enzvimbo yekugadzirwa kwesimba remagetsi ezuva uye nemagetsi emagetsi ezuva, nezvimwewo .; 2. Simba rese rinotakurwa neyemagetsi yekugadzira system uye nenguva yekushanda yemutoro mazuva ese; 3. Funga nezve kubuda kwemagetsi esisitimu uye uone kana yakakodzera ...
Solar Photovoltaic Cell Zvinhu Kurongwa
Zvinoenderana nezvigadzirwa zvemagetsi ezuva maseru photovoltaic, anogona kukamurwa maseru esilicon-based semiconductor maseru, CdTe matete mafirimu maseru, maCIGS matete mafirimu maseru, dhayi-inosimbisa matete epfirimu maseru, maseru ehupenyu zvinhu uye zvichingodaro. Pakati pavo, silicon-based semiconductor maseru akapatsanurwa mu ...
Solar Photovoltaic Kuisirwa Sisitimu Kurongwa
Zvinoenderana negadziriro yekumisikidza yezuva Photovoltaic maseru, inogona kuganhurwa mune isiri-yakasanganiswa yekuisa system (BAPV) uye Yakabatanidzwa yekuisa system (BIPV). BAPV inoreva yezuva photovoltaic system yakasungirirwa pachivako, icho chinonziwo "kuisa" sola ...
Solar Photovoltaic System Kurongwa
Solar photovoltaic system yakakamurwa kuita-grid photovoltaic simba rekugadzira system, grid-yakabatana photovoltaic simba rekugadzira system uye yakagovera photovoltaic simba rekugadzira system: 1. Off-grid photovoltaic simba rekugadzira system. Iyo inonyanya kuve inoumbwa neyezuva cell cell module, controll ...
Ongororo ye Photovoltaic Modules
Sero rimwe chete rezuva harigone kushandiswa zvakananga senzvimbo yesimba. Magetsi anofanirwa kuve akaverengeka bhatiri tambo, kubatana kwakabatana uye zvakakamurwa zvakapetwa muzvinhu. Photovoltaic module (inozivikanwawo semaseru ezuva) ndiwo musimboti wesimba rekugadzira magetsi ezuva, iriwo inonyanya kukosha ...
Zvakanakira uye Zvakaipira Solar Photovoltaic System
Zvakanakira nekukanganisa kwezuva photovoltaic system zvakanakira Simba rezuva hariperi. Simba rakajeka rinotambirwa nepasi rino rinogona kusangana nesimba remagetsi repasi rose zviuru gumi. Solar photovoltaic masisitimu anogona kuiswa mune chete 4% yemasango epasi, ge ...
Ko Iyo Mumvuri we Dzimba, Mashizha kana Kunyangwe Guano pa Photovoltaic Modules Inokanganisa iyo Simba Generation System?
Iyo yakavharirwa photovoltaic sero ichaonekwa sekutakurwa kwemutoro, uye simba rinogadzirwa nemamwe maseru asina kuvhurwa rinounza kupisa, izvo zviri nyore kuumba inopisa nzvimbo maitiro. Nekudaro, iyo simba rekugadzira ye photovoltaic system inogona kudzikiswa, kana kunyangwe iwo ma photovoltaic module anogona kupiswa.
Simba Kuverenga kweSolar Photovoltaic Modules
Solar photovoltaic module inoumbwa ne solar panel, kuchaja controller, inverter uye bhatiri; Solar dc magetsi emagetsi haabatanidzi ma inverters. Kuitira kuti gadziriro yemagetsi ezuva inokwanisa kupa simba rakaringana remutoro, zvinodikanwa kuti usarudze chimwe nechimwe chikamu nenzira ...
Kuisirwa Nzvimbo yeSolar Photovoltaic Bracket
Kuiswa kwezuva pv stent nzvimbo: kuvaka denga kana madziro uye ivhu, kuisirwa nzira: yakakodzera kumaodzanyemba (yekutevera system kusiana), kumisikidza Angle: yakaenzana kana padyo kuisa yemunharaunda latitude, mutoro zvinodiwa: mutoro, chando mutoro, kudengenyeka kwenyika zvinodiwa, kurongeka uye nzvimbo ...
Kupatsanura kweMidziyo Ye Photovoltaic Tsigiro Ekugadzira
Zve photovoltaic stents kugadzirwa kwekongiri zvinhu, zvinonyanya kushandiswa mune hombe michina ye photovoltaic, hunhu hwechinhu chakanyanya kukosha, kazhinji zvakare chinogona kungoiswa mumunda, asi zvakare chinofanirwa kuisa mune yakasarudzika mamiriro zviri nani, iyo yekushandisa zvinhu haina chete ine yakanyanya stabili ...